Ny sabotsy 15 jona teo no nitranga ny sinto-mahery nahatrarana azy ireo ary mbola misy namany tsy trstra. Voalazan’ny mpampiasa iny lalana Razafindrazay iny, tsy mifidy ora ny fanendahana, indrindra raha mandeha irery. Na amin’ny atoandro aza, manatanteraka ny asa ratsiny hatrany ireo tontakely. Miery anaty lobolobo ry zalahy ary mipoitra tampoka rehefa hanatanteraka ny asa ratsiny. Tsy mivezivezy eo no ho eo anefa izy ireo ka sarotra ny hanavahana azy amin’ny maro. Efa misy mpitazana avy aty ambany na avy eny ambony koa amin’izy ireo ka mifanome hevitra amin’ny alalan’ny somaiso. Samy nanala ny hatezerany tamin’ny daroka teo moa ireo nahatratra nialoha ny nitondrana azy roalahy tao amin’ny kaomisaria Mahamasina.